फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, यस्तो छ नयाँ मूल्यदर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ।
बुधबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ। बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई-दुई रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो।
नयाँ मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको एक सय १० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मुल्य ९२ रुपैयाँ पुगेको छ। एलपी ग्याँसको मुल्य भने यथावत रहेको छ।
नयाँ मुल्य सूची आज मध्यरातिबाट लागू भएको छ।